Horonan-tsary malaza Emerald City, mijery sarimihetsika maimaim-poana
Sarimihetsika momba ireo zatovolahy goavam-be ao amin'ny tanàna malaza nalaza. Ao anatin'ilay fanovana dia mihodina toy ny mpivady efa misotro ronono, ho an'ny tombontsoan'ny lahy sy ny vavy. Ny horonantsary dia notarihin'ireo mpanakanto avy any Washington, izay nanamafy ny fahamendrehana sy ny fahaiza-mamorona manokana, noho ny fanaovana sary mamoafady araka ny antony niorenan'ny sarimihetsika iray. Ny antontan'antoka malemy dia mampiseho ny 45% amin'ireo mpanjifan'ity tranonkala ity dia olon-dehibe.
tena > Comics > Emerald City
Jereo ny tanàna emeralda pôrnôgrafia - an-tserasera amin'ny findainao
fifanakalozan-kevitra sarimihetsika "Emerald City"